कोठामा खाट थिएन, घरबाट ल्याएको गुन्द्री ओछ्याएर सुतिन्थ्यो तर पनि रंगशाला बन्छ : धुर्मुस « हाम्रो ईकोनोमी
कोठामा खाट थिएन, घरबाट ल्याएको गुन्द्री ओछ्याएर सुतिन्थ्यो तर पनि रंगशाला बन्छ : धुर्मुस
जुँगाको ढाँचा हेर्दा त पुरानो भुवन केसीको झझल्को आयो नि ?
हाहा.. त्यतिसम्म त होइन कि ? जुँगा पालेको चाहिँ हाम्रो नयाँ चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ का लागि हो । कथाले मागेर भनौं न । जुँगा बिल्कुल अर्गानिक र मेरो निजी भएकाले भुवन केसीको कपिराइट चाहिँ नलाग्ला ।
आफैंलाई ऐनामा हेर्दा कत्तिको अनौठो लाग्छ ?
पहिले बस्ती निर्माणका क्रममा काट्न नभ्याएर जुँगा-दाह्री बढ्थ्यो । तर, त्यतिबेला त ऐना हेर्न पनि फुर्सद हुन्थेन । अहिलेचाहिँ यसो ऐना हेर्दा जिल्ल पर्छु । बोल्दाखेरि पनि जुँगाका कारण अलि असहज भएको हो कि, बोल्ने भाँती पुगेको छैन कि जस्तो भान हुन्छ ।
क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा होमिएका बेला एकाएक फिल्म निर्माणतिर पो लाग्नुभयो त ?
एकाएक होइन । फिल्म बनाउने पुरानै योजना हो । आफ्नो क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि केही त गर्नैपर्ने थियो । फिल्म बनाउने भनेर एक-डेढ वर्षदेखि नै गृहकार्य गरेका थियौं । तर, विभिन्न काममा व्यस्त रहँदा समय व्यवस्थापन गर्न सकिएको थिएन । अहिले अलिकति खुकुलो समयमा घोषणा गरेका हौं । रंगशालाको काम त पहिलो प्राथमिकतामा छँदैछ, फिल्मले त्यसलाई अवरोध गर्दैन ।
तपाईं फिल्ममा व्यस्त हुँदा रंगशालाको काम अलपत्र पर्दैन ?
अहिले रंगशालाको डीपीआर अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि एकाध महिना लाग्छ । त्यतिञ्जेल म आफैं खटिनुपर्ने गरी कामको चाप छैन । फिल्डमा कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । टिमका साथीहरुले पनि हेर्नुहुन्छ । अलपत्र पर्ने स्थिति हुँदैन ।
फिल्मको सुटिङ जम्मा एक महिनाको मात्र हो । त्यसपछिको सबै जिम्मेवारी निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई नै सुम्पिने छु । म फिल्मको अरु काम हेर्न भ्याउँदिनँ । सुटिङ सकिएपछिको समय रंगशालालाई नै दिने हो ।
तपाईं दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको समूहबाट चाहिँ किन अलग हुनुभयो ?
मेरै कारणले हो । जतिबेला उहाँहरुले फिल्म निर्माण गर्नुभयो, म चाहिँ बस्ती निर्माणमा व्यस्त थिएँ । बस्तीको काम ३/४ महिनामा सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । फिल्म सुटिङमा जानेवित्तिकै एक/डेढ महिना टाइम दिनु परिहाल्यो । त्यसले बस्ती निर्माणमा ढिलाइ हुन सक्थ्यो ।
तर, आज पनि म त्यो समूहलाई आफ्नो मातृसमूह नै मान्छु । आफैंले चलचित्र निर्माण गर्ने आँट पनि त्यही टिमका कारण आएको हो । हास्य कलाकारहरुले लिडिङ रोल गर्दा पनि दर्शकहरु हलसम्म आउँदा रहेछन् भन्ने मान्यता उहाँहरुले नै स्थापित गर्नुभएको हो । अहिले पनि सबैजनासँग मेरो उत्तिकै सुमधुर सम्वन्ध छ ।
एकातिर दीपक-दीपाको डफ्फा र अर्को महजोडीको डफ्फा चलचित्र निर्माणमा छ । तपाईंहरुले चाहिँ हास्य कलाकारको तेस्रो शिविर जन्माउन खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । हामीले आफ्नो कलाकारितालाई निरन्तरता दिन मात्र खोजेका हौं । अलग समूह भए पनि हास्य कलाकारहरुबीचमा राजनीतिक दलमा जस्तो गुटबन्दी छैन ।
पाँच वर्षदेखि सुन्तली र तपाईं दुबैजना सामाजिक काममै व्यस्त हुनुहुन्छ । पैसा कमाउने कुनै उद्यम गर्नुभएको देखिँदैन । फिल्म बनाउन करोडौं पैसा कहाँबाट ल्याउनुभयो ?
पहिलो कुरा त, हामी पनि कलाकारिताबाट एक स्तरको हैसियत बनाएकै मान्छे हौं । एउटा फिल्म बनाउन चाहँदा लगानी गर्नै असम्भव नहोला । फेरि आजकाल त फिल्म बनाउने भन्नेबित्तिकै अगि्रमरुपमा डिजिटल राइट्स र ओभरसिज राइट्स पनि बेच्न सकिने स्थिति छ ।
यद्यपि, अहिले हामीले बनाउन लागेको ‘सेन्टी भाइरस’को लगानीकर्ता चाहिँ म होइन । धुर्मुस-सुन्तलीको ब्यानरमा निर्माण मात्र भएको हो, हाम्रो पैसा यसमा छैन । फिल्मको निर्माता डिन्डु लामा हुनुहुन्छ । उहाँ अमेरिकामा बस्ने व्यवसायी हो । गिरानचौर बस्ती निर्माणदेखि नै उहाँको साथ र सहयोग हामीले पाइरहेका थियौं । हाम्रा हरेक परियोजनामा उहाँले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ ।
एक वर्षअगाडि उहाँ नेपाल आउँदा चलचित्र निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । चलचित्रले नाफा कमायो भने त्यसको २० प्रतिशत हिस्सा समाजसेवा लगाउनसमेत उहाँ तत्पर भएपछि हामीले त्यतिबेला नै उहाँसँग सम्झौता गरेका हौं ।
योबीचमा अरु फिल्मबाट पनि थुप्रै अफर आएका थिए क्यारे, किन गर्नुभएन ?
धेरै निर्माताले कुरा गर्नुभएको थियो । ठूला-ठूलो पारिश्रमिकको अफर आए । तर, समय अभावका कारण हामीले स्वीकार्न सकेनौं ।
कतिसम्म पारिश्रमिकको अफर आएको थियो ?
एकजना निर्माताले ५० लाख रुपैयाँ प्लस निश्चित प्रतिशत सेयरको अफर गर्नुभएको थियो । अर्को एक जनाले एन्ड्भान्स रकम नै छोड्नुभएको थियो । तर, हामीले के सल्लाह गर्‍यौं भने पैसामा लोभिएर फिल्मतिर लाग्यौं भने हाम्रो चालु परियोजनामा समस्या आउँछ । त्यसैले एड्भान्स रकम पनि फिर्ता गरिदियौं ।
तपाईंहरु दुबैजना सामाजिक काममा व्यस्त भइरहँदा आयआर्जनको स्रोत चाहिँ के त ?
हामी अहिले पनि ६ वटा कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेस्डर छौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक, सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर, जगशक्ति स्टिल, सालीमार सिमेन्ट, मगमग तयारी चाउचाउ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग हाम्रो वाषिर्क सम्झौता छ । त्यसबाट आउने पैसाले नै हाम्रो घर खर्च र चलेको छ । त्यसबाहेक देश तथा विदेशमा हुने कार्यक्रममा समय मिलेसम्म सहभागी भइरहेका छौं । यूट्युवमा भिडियोहरु पनि आइरहेका छन् ।
सरकारले पनि तपाईंहरुलाई सरसफाइ दूत बनाएको छ, त्यताबाट चाहिँ पैसा आउँदैन ?
हामीले नेपाल सरकारको सरसफाइ दूतका रुपमा काम गरिरहेका छौं । यो उपसचिव स्तरको पद हो । तर, त्यसबापत आजसम्म एक रुपैयाँ पनि सरकारबाट लिएका छैनौं । सरकारसँग मागेका पनि छैनौं । सेवाको भावनाले मात्र यो जिम्मेवारी लिएका हौं ।
यो मात्र होइन । हामी पुनर्निमाण दूत पनि हौं । यस्तै प्रदेश नम्बर १ ले स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको सद्भावना दूत बनाएको छ । तर, सबै अवैतनिकरुपमै गरेका हौं ।
तपाईंहरुलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुमा ‘दूत’ बन्न संयुक्त अफर आउँछ कि आफूलाई अफर आउँदा कुञ्जनाजीलाई पनि राख्न प्रस्ताव गर्नुहुन्छ ?
हामीलाई सबैले धुर्मुस-सुन्तलीकै हिसाबमा डिल गर्छन् । दर्शकले पनि दुवैलाई एकसाथ देख्न चाहन्छन् । उनी आफैंमा एक सक्षम कलाकार हुन् । मैले मेरी श्रीमतीलाई पनि राखिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको कोषबाट कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ ?
पारिश्रमिक लिँदैनौं । यो संस्था हामीले नितान्त सामाजिक कामका लागि स्थापना गरेका हौं । पैसा कमाउनलाई होइन । विदेशमा रगत-पसीना बगाइरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो गाँस काटेर पठाएको पैसाबाट तलव खान हाम्रो आत्माले दिँदैन ।
मैले भनिहालेँ, हामी आफ्नो कलाकारिताबाटै पालिएका छौं । फाउन्डेसनबाट हामीले मोबाइल खर्चमात्रै लिन्छौं । मोबाइलमा धेरैजसो अफिसियल प्रयोजनका कुराकानी हुने भएकाले त्यो खर्च चाहिँ लिएका हौं ।
अब क्रिकेट रंगशालातिर फर्कौं । तीन अर्ब रुपैयाँ जनसहयोग जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ । यो त अति नै महत्वाकांक्षी भएन र ?
तपाईंलाई पनि याद होला, हामीले रंगशाला बनाउने घोषणा गर्दाखेरिको माहोल अर्कै थियो । नेपालले भर्खरै एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएकाले देशभर खुशीयाली छाएको थियो । क्रिकेट समर्थकहरु देशभित्र तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला चाहियो भनेर आवाज उठाइरहेका थिए ।
त्यतिबेला हामी त ‘नमूना नेपाल’ नामको परियोजनामा व्यस्त थियौं । तर, जनस्तरबाट हामीलाई रंगशाला निर्माणमा अघि बढ्ने आह्वान भयो । सामाजिक सञ्जालदेखि हाम्रो कार्यालयमै आएर समेत धेरैले यस्तो सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि मैले फेसबुकमा प्रश्न राखेको थिएँ, पहिले नमुना नेपाल कि रंगशाला ? त्यसमा हजारौंले कमेन्ट गर्नुभयो । सतप्रतिशत कमेन्ट रंगशालाको पक्षमा थिए । त्यसैले हामीले नमूना नेपाललाई थाती राखेर जनभावनाको अनुरुप रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेका हौं ।
त्यतिबेला ३ अर्ब रुपैयाँ केहीदिनमै उठ्लाजस्तो माहोल थियो । हामी धेरै ठाउँमा जग्गा हेर्न पनि गयौं । जहाँ जाँदा पनि जनताले उच्च सम्मान र स्वागत दिनुभयो । उहाँहरुको भावुकता हेर्दा रंगशाला नेपालमा कति जरुरी छ भन्ने महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।
म सम्झिन्छु रुपन्देही जाँदाको क्षण । त्यहाँ जग्गा हेर्न जाँदा जहाज ढिलो भएर हामी राति अबेर मात्र विमानस्थलमा ओर्लिएका थियौं । त्यति राति पनि त्यहाँ ठूलो जनसमूह हामीलाई पर्खेर बसेको रहेछ । बच्चादेखि बृद्धसम्म हातमा राष्ट्रिय झण्डा र माला बोकेर उभिनुभएको देख्दा हामीलाई सपना हो कि विपनाजस्तो भएको थियो ।
अनि त्यो माहोल कसरी बिगि्रयो त ? योबीचमा आफूबाट कतै चूक भएको महसुस हुन्छ ?
यही त म पनि बारम्बार सोच्ने गर्छु, आखिर गल्ती हामीबाट के भयो ? हामी त उत्तिकै इमान्दारितापूर्वक लागिरहेका छौं । कतै पनि आफ्नो प्रतिवद्धताबाट डग्मगाएका छैनौं ।
भइदियो के भने, रंगशालाका लागि जग्गा छनोट र प्राप्तिले निकै समय लियो । एक वर्षसम्म अलमल हुँदा जनतामा पहिलेको उत्साह सेलाइसकेको रहेछ । उहाँहरुलाई पुरानै माइन्डसेटमा फर्काउन हामीलाई चुनौतिपूर्ण भयो ।
रंगशाला घोषणा कार्यक्रममा तपाईंले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डसम्मलाई उभ्याउनुभयो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई भाषण गराउने अनि जनतासित पैसा माग्ने कुरा ठीक भएन कि ?
अहिले आएर हामीलाई पनि धेरै कुरा महसुस भएको छ । हाम्रा अघिल्ला परियोजनामा आफ्नै हिसाबले निर्णय लिन्थ्यौं । सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखेर घोषणा गरिन्थ्यो ।
तर, पहिलेको तुलनामा यो फरकखालको आयोजना हो । लागत अत्यन्त ठूलो अनि निर्माणको प्रक्रिया पनि जटिल । राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यसैले हामी सरकारसँग टाढा रहेर यत्रो संरचना निर्माण गर्न सहज हुँदैन भन्ने ठान्यौं । धेरैले सुझाव दिनुभयो कि पहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेर हुँदैन । धुमधामले नै गरौं भन्ने भयो । अहिले सम्झिँदा त्यसमा अलिकति कमजोरी भयो कि भन्ने पनि लाग्छ ।
तर, भोलि आयोजनाका लागि जन संकलनले बजेट अपुग भयो भने सरकारलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । रंगशाला निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म सरकारसँगै समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबको उपस्थितिमै उद्घाटन गराउँदा भोलि उहाँलाई पनि अपनत्व बोध होला भन्ने ठानियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनुभयो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाचाहिँ देखिनुभएन । यसले गर्दा कतिपयले तपाईंहरुलाई नेकपाका मान्छे पनि त ठाने नि ?
मैले त्यसबेला कार्यक्रममा बोलाउँदा सबैभन्दा बढी फलोअप गरेको देउवाजीलाई नै हो । म आफैं उहाँको निवासमा पुगेर निम्तो गरेको थिएँ । पटक-पटक फलोअप पनि भयो । तर, उहाँले आफू नभ्याउने भनेर डा. शशांक कोइरालालाई पठाउनुभयो ।
घोषणा कार्यक्रमपछि नेकपाको सरकारले धुर्मुस-सुन्तलीलाई प्रयोग गरेको भन्नेखालका आरोप पनि लागे । तर, ती आरोपमा सत्यता छैन । हाम्रो विगत हेर्दा हुन्छ । हामी कसैबाट प्रयोग भएका छैनौं र हुनेवाला पनि छैनौं । विगतदेखि जुनसुकै सरकारसित पनि हामीले मिलेर काम गर्दै आएका छौं । बुझ्ने वर्गले पक्कै बुझ्नुभएको होला यति कुरा ।
रंगशाला निर्माणका लागि धेरै ठाउँबाट जग्गा दिने प्रस्ताव आएका थिए, तर अन्ततः प्रचण्डपुत्री मेयर रहेको भरतपुरलाई नै छनोट गर्नुका पछाडिको कारणचाहिँ के त ?
प्रचण्डलाई सोचेर भरतपुर गएका हुँदै होइनौं । देशकै सेन्टरमा पर्ने भएकाले भरतपुर प्राथमिकतामा परेको हो । साथै सबै मापदण्ड पूरा भएको उपयुक्त जग्गा पनि त्यहीँ भेटियो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका कतिपय नकारात्मक टीकाटिप्पणीहरुले तपाईंलाई कत्तिको निराशा वा पीडावोध हुन्छ ?
यसपालि देखिने गरी आलोचना खेपियो । अदृश्यखालको चाहिँ पहिले पनि खेपिरहेका थियौं । ठूला टर्चर पनि भोगेका छौं । ती सबै कुराहरु म अहिले सार्वजनिक गर्न चाहन्न ।
हामी पनि मानिस हौं । मन त दुखिहाल्छ । सबै चिज छोडेर दुवैजना मरी मेटेर देश सेवामा लागेका छौं । आखिर हामीले पाउने के हो त ? निश्वार्थरुपमा देशका लागि केही गर्न खोज्दा किन हामीलाई नै गलत देखाइन्छ ?
कहिलेकाहीँ के सोचाइ आउँछ भने कलाकारिताबाट नाम र दाम दुवै कमाइरहेका थियौं । देश विदेश घुमिरेहकै थियौं । नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तो भयो । फेरि धेरै जनताले दिनुभएको माया र गर्नुभएको विश्वास सम्झेर आफैंलाई ढाडस दिन्छौं । मनमा सकारात्मक सोचको विकास गर्छौं । आज नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुले पनि भोलि पक्कै स्याब्बासी दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास आफूभित्र जगाउँछौं ।
हालैको डोजर काण्डले तपाईंहरुलाई थप सेटब्याक भयो होइन ?
त्यो ठूलो सेटब्याक थियो । अकल्पनीय नै हो हाम्रा लागि । क्षतिको हिसाबले ठूलो नहोला । तर, हाम्रो भावना र मर्ममाथि ठूलो प्रहार थियो त्यो । हामी त एक हिसाबले आयोजनाबाटै पछि हट्ने स्थितिमा पुगेका थियौं ।
यसअघि बस्तीहरु निर्माण गर्दा सबैभन्दा खुशी स्थानीयवासी हुन्थे । तर, यस आयोजनामा चाहिँ स्थानीयवासीलाई किन खुशी बनाउन सक्नुभएन ?
सम्बन्धित निकायले बुझाउन नसकेको हो जस्तो लाग्छ । हामीले त महानगरपालिकासित सम्झौताबमोजिम बनाउने हो । आफूलाई दिइएको जग्गा सुरक्षित राख्ने अधिकार हामीसित थियो नि । कुनै स्थायी पर्खाल लगाएका पनि थिएनौं, जस्ताले बारबेर गरेको मात्र हो । त्यो पनि टोलविकास संस्थालगायत सबैसँग सहमति लिएर गरेका हौं । तर, एकाएक डोजर चलाइयो ।
हामीले त विगतमा आफैं जग्गा किनिदिएर पनि जनतालाई घर बनाइदिएका हौं नि । हामी कसरी जनताको जग्गा खोस्न सक्छाैं ? जनतालाई रुवाएर मलाई रंगशाला बनाउन मलाई के आवश्यक थियो ? हाम्रो देशमा कहाँबाट कसरी अवरोध हुन्छ, कुनै टुंगो हुँदैन । कसैका केही निहीत स्वार्थ थिए होलान् ।
असन्तुष्ट स्थानीयवासीलाई तपाईंहरुले सम्झाउनु/बुझाउनुपर्नेमा आरोप-प्रत्यारोपमा लाग्नु ठीक भएन कि ?
मैले त त्यसलाई तुरुन्तै साम्य बनाउने नै सोचेको थिएँ । तर, नचाहँदा नचाहँदै विषय चर्किँदै गयो । उहाँहरुको महत्वाकांक्षा बढेको देखियो, जसलाई हामीले सम्वोधन गर्न सम्भव थिएन । तर, मैले कसैलाई एक शब्द गाली गरेको छैन ।
तपाईंले गाली नगरे पनि कुञ्जनाजीले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिनुभएको भिडियो भाइरल भयो । त्यसलाई लिएर धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आए । उहाँ त्यसरी उत्तेजित हुनु ठीक थिएन कि ?
मान्छेको आ-आफ्नो स्वाभाव हुन्छ । म अलि सफ्ट नेचरको छु । उनी हक्की छिन् । आफ्नो पेटमा कुरा राख्न सक्दिनन् । चाँडै भावुक पनि हुन्छिन् ।
निर्माणस्थलमा डोजर चलेका बेला उनी फिल्डमा थिइनन् । काठमाडौंमा एउटा सहकारीले सहयोग हस्तान्तरण गर्दै गर्दा उनले त्यो खबर सुनेकी रहिछन् । त्यसैले उनी बढी ‘इमोसनल’ बनिन् । खबर सुनेर उनी चितवन आइन् । तर, घटनास्थल नपुग्दै युट्युवरहरुले प्रतिक्रिया मागे । त्यसक्रममा उनको आक्रोश प्रकट भयो । शब्दचयनमा केही गल्ती भयो होला । यो कुरा उनी आफैंले पनि रियलाइज गरेकी छन् । यसप्रति हामी अहिले पनि क्षमाप्रार्थी छौं ।
तथापि, त्यो डोजरकाण्ड एउटा अपराधिक कार्य नै थियो । नेपालमा हाम्रो तीव्र आलोचना भइरहँदा मलेसियाका नेपाली जनताले रुँदै हामीलाई दिएको पैसाले किनिएको जस्ता थियो, त्यसमाथि डोजर चल्दा हामीलाई आफ्नो छाती चिरिएको जस्तो भयो भने । यस्तो परिस्थितिले जुनसुकै मान्छेलाई पनि इमोसनल बनाउँछ ।
भिडियोमा आएका नकारात्मक टिप्पणीले कुञ्जनाजीलाई कस्तो असर गर्‍यो ?
उनी मानसिकरुपमा निकै डिस्टर्ब भइन् । एकखालको डिप्रेसनकै अवस्थामा पुगिन् । धेरै रोइन् । विस्तारै अहिले सम्हालिएकी छन् ।
डोजरकाण्डपछि फेरि काममा फर्किने स्थिति कसरी बन्यो त ?
त्यो घटना भइसकेपछि हामीलाई धेरैले रंगशालाबाट ब्याक हुन सुझाव दिनुभएको हो । हाम्रो टिमभित्र पनि त्यस्तो मत प्रकट भएको थियो । यदि कसैलाई चाहिएको छैन भने हामीले मात्र किन मरिहत्ते गर्ने भन्ने कतिपयको भनाइ थियो । तर, धेरैले चाहिँ आवेशमा निर्णय लिन नहुने विचार राख्नुभयो ।
डोजर चलाइएको घटनालाई लिएर हाम्रो कसैप्रति कुनै इगो थिएन । जग्गा प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । मास्टरप्लान छ हातमा । फिल्डमा काम सुरु गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी पछि हट्दा ठूलो निराशा पैदा हुन सक्थ्यो । हाम्रो त एकमात्र ध्येय रंगशाला निर्माण गर्ने न हो । त्यसैले काम गर्ने वातावरण पुनस्र्थापित भएपछि हामी फर्किन तयार भयौं ।
रंगशालाका लागि आशातीतरुपमा आर्थिक संकलन हुन नसकिरहँदा कत्तिको दबाव महसुस भएको छ ?
दबावको त के कुरा गर्नु । दिनरात रंगशाला मात्रै घुम्छ दिमागमा । ३ अर्ब रुपैयाँ भनेको सिंगो खेलकुद मन्त्रालयको बजेट हो । तर, पैसा संकलनको गति निकै सुस्त छ । डीपीआर बनाउने कम्पनीलाई तिर्ने पैसा पनि छैन अहिले त । सोच्नुस न, मान्छेलाई आफू बस्ने एउटा घर बनाउँदा त कति तनाव हुन्छ, यो त देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको परियोजना हो । त्यसमाथि अनेक आरोपहरु झेल्नुपर्ने परिस्थिति छँदैछ ।
अहिलेसम्म कति आर्थिक संकलन भयो ?
जम्मा ६ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा हाम्रो खातामा आएको चानचुन २ करोड मात्र हो । त्यसबाहेक महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले ५ र ६ करोड दिने भनेका छन् ।
देश-विदेशमा रहनुभएका हाम्रा साथीभाइ, शुभचिन्तकहरु लागिरहनुभएको छ । चितवनमा राम्रै माहोल बनिरहेको छ । अब एकाध महिनाभित्र डीपीआर पनि आउला । डीपीआर सार्वजनिक भएपछि आयोजनामा फेरि एकखालको रक्तसञ्चार होला भन्ने आशामा छौं । एकपटक फेरि जनता जुर्मुराउनेछन् भन्ने विश्वासमा छौं ।
जनसंकलन भएन भने सरकारले सहयोग गर्ला नि ? केही कुराकानी प्रधानमन्त्रीसँग भएको छ ?
छैन । पछिल्लो समयमा उहाँसँग भेट पनि भएको छैन । उहाँको व्यस्तताले भेट पाउनै मुस्किल छ ।
त्यसोभए, अब रंगशाला बन्छ भन्नेमा जनता कति आशावादी हुने ?
मैले पहिले जे भनेको थिएँ, त्यसमा अहिले पनि अडिग छु । यदि जग्गा र स्रोत व्यवस्थापन भयो भने दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउँछौं भनेका छौं ।
म अहिले पनि ठोकुवा गरेर भन्छु कि आर्थिक वा अन्य कुनै व्यवधान आएनन् भने दुई वर्षमा रंगशाला तयार हुन्छ । जनता जुर्मुराएको खण्डमा ३ अर्ब संकलन गर्न असम्भव कुरा होइन ।
जनस्तरबाट रंगशाला बनेपछि यसको स्वामित्वचाहिँ कोसित हुन्छ ?
हामीले यसलाई एउटा व्यवस्थापन समितिअन्तरगत सञ्चालन गर्ने भनेका छौं । व्यवस्थापन समितिमा महानगरपालिका, धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन र अभियन्ताहरु रहनेछन् । महानगरसँग भएको सम्झौता यही नै हो ।
रंगशालाबाट आम्दानी पनि होला, त्यो कसले पाउँछ ?
व्यवस्थापन समितिअन्तरगत एउटा कोष स्थापना हुन्छ । रंगशालाको आम्दानी त्यही कोषमा जान्छ । हामीले एकेडेमीको मोडलमा रंगशाला सञ्चालन गर्ने भनेका छौं । ७७ वटै जिल्लाबाट विभिन्न विधाका खेलाडीलाई ल्याएर प्रशिक्षित गराउने योजना छ । कोषको पैसा यसमा खर्च हुन्छ । बाँकी पैसा सामाजिक कामलाई छुट्याइन्छ । देशमा कुनै आपतविपत पर्दाखेरि पनि त्यो पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कतिपयको भनाइ के छ भने विकासको काम त सरकारले गर्ने हो । जनताले सरकारलाई कर तिरेका छन् । अनि, विकास पनि जनताबाटै चन्दा उठाएर गर्ने हो भने किन चाहियो सरकार ? यस्तो प्रश्नलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
प्रश्न जायज हो । तर, हामी त जनताले घच्घच्याएर नै यो अभियानमा होमिएका हौं नि । सरकारले आजसम्म एउटा पनि क्रिकेट रंगशाला बनाउन सकेको छैन । सुरु गरिएका रंगशाला वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । त्यसैले जनस्तरबाटै गरेर देखाइदिउँ भन्ने हिसाबले अघि बढिएको न हो । यो निर्माण भयो भने सरकारलाई पनि त पाठ हुन्छ ।
जनता एकजुट हुँदा देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । अब विकासका लागि पनि एकजुट होउँ न । यसलाई एउटा नमूनाका रुपमा लिउँ न । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले पनि जबरजस्ती दिनुपर्छ भनेका छैनौं । सक्नेले दिने हो ।
सरकारले विकास गरेन भनेर हामी सामाजिक सञ्जालमा कराउँछौं । आज सरकारलाई विकासको एजेन्डामा हिँड्न बाटो देखाउने मौका हो यो । यसले दिने सन्देश र उत्पन्न गर्ने जागरण अभूतपूर्व हुनेछ ।
तर, यही मोडालिटीमा देश विकास हुन सक्छ र ?
हामीले त्यस्तो भनेकै छैनौं । रंगशाला नेपालमा अत्यावश्यक भयो, तर सरकारले तत्काल निर्माण गर्न सक्ने छाँटकाट देखिएन । त्यसैले एउटा रंगशाला जनस्तरबाट बनाऔं भनेको हो । यसको अर्थ सबै विकासका काम जनताले नै गर्ने भन्ने होइन ।
तर, रंगशाला निर्माण सफल भयो भने सरकारलाई पनि आफ्ना विकाससम्वन्धी नीतिनियम र कार्यशैली बदल्न पक्कै प्रेरणा हुनेछ । किनकि अहिलेको नीति नियममा नै धेरै यस्ता विषयहरु छन्, जसले जुनसुकै विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुन्छ ।
यो एउटा यस्तो परियोजना हो, जसले देशको भविष्यप्रति जनतालाई पुनः आशावादी तुल्याउनेछ । म मेरी छोरीलाई सम्भिmन्छु । उनको पुस्तालाई हामीले यही तन्नम अवस्थाको नेपाल दिने ? देशलाई सधैंभरि यही अवस्थामा राखिरहने ?
बस्ती निर्माण गर्दा तपाईं आफूले श्रम गरेको फोटोसेसन गर्नुहुन्छ, अनि त्यही फोटो प्रचारमा ल्याएर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्नुहुन्छ भन्ने कतिपले आरोप लगाउँछन् नि ?
यो हास्यास्पद आरोप हो । म सानैदेखि दुःख गरेर हुर्किएको मान्छे । मलाई श्रम गर्न कहिल्यै गाह्रो लागेन । बस्ती निर्माण गर्दा म अन्य कामदारकै बीचमा रहेर आफू पनि काममा खटिन्थेँ । मेरो दैनिकी नै त्यही हुन्थ्यो । हामीले काम गरेको देखेपछि अरुलाई पनि उर्जा मिलोस् भनेर हो ।
अर्को कुरा, हामीले श्रम गर्नुहुँदैन भन्ने पनि त छैन । आफू सुकिलो-मुकिलो भएर कामदारहरुलाई अह्रन-खटन गर्ने मेरो शैली नै होइन । त्यसरी गरेको भए यति चाँडो कुनै पनि बस्ती बन्दैनथे ।
बस्ति निर्माण गर्दा मैले ढुंगा बोक्ने, गाह्रो लगाउनेदेखि डोजर चलाउनेसम्म गरेको छु । मैले काम गरिरहँदा कसैले फोटो खिच्दा नखिच भन्ने कुरा आउँदैन । त्यसमा ध्यान पनि दिइएको हुँदैन ।
हो, कतिपय यस्ता फोटा हामीले सहयोग संकलनका क्रममा मानिसहरुलाई उत्प्रेरित गर्न प्रयोग गरेका छौं ।
एकपटक बच्चालाई पिठ्यूमा राखेर बाढी तरेको फोटोमा पनि धेरै टिप्पणी भए । त्यो फोटो चाहिँ कसरी खिचिएको थियो त ?
बाढीको फोटो सप्तरीको हो । त्यहाँ बच्चाको परिवार एउटा टापुजस्तोमा अलपत्र परेको थियो । बच्चा तीन/चार दिनदेखि भोकै रहेछ । रुँदै हामीकहाँ आयो । हाम्रो टोली राहत सामग्री लिएर पारि पुगिसकेको थियो । बच्चालाई जसरी पनि पारि लैजानुपर्ने भयो । त्यतिबेला अरु केही नसोची मैले बच्चालाई काँधमा लिएँ र बाढीमा हेलिएँ ।
मैले ज्यान जोखिममा मोलेरै यसरी बच्चालाई लिएर बाढीमा पसेको थिएँ । त्यतिबेला पारिपट्टी हाम्रो गाडीमा एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग पावरफुल क्यामरा रहेछ । उहाँले क्यामरा जुम गरेर मैले बाढी तरिरहेको फोटो खिच्नुभएछ । म पारि पुगेर बच्चालाई परिवारसम्म पुर्‍याउँदा निकै ठूलो विजयको अनुभव गरेँ । चिच्याएर रोएँ पनि । ठूलो धर्म गरेँ जस्तो भयो । अनि मलाई ती पत्रकार भाइले फोटो देखाए । फोटो हेर्दा त आफैंलाई डर लाग्यो । अनि मनमा के सोचाइ आयो भने यो फोटो मैले सार्वजनिक गरेँ भने बाढीपीडितहरुको कस्तो अवस्था छ र उनीहरुलाई उद्धारको कति आवश्यकता छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण देखिनेछ । त्यसैले मैले आफ्नै फेसबुकबाट त्यसलाई पोष्ट गरेको हुँ ।
त्यसको दुई दिनसम्म फेसबुक चलाइएन । तेस्रो दिन हेर्दा पो हंगामा भइसकेछ । कतिले गलत ढंगले बुझेका रहेछन् । के फोटो खिच्नकै लागि मैले यत्रो रिस्क मोलेँ होला ? बाढी तर्दा मैले दुईपटक पानी खाएको छु ।
तपाईंकी सानी छोरी छिन् । सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न हिँडिरहँदा बाबुको दायित्व कसरी निभाइरहनुभएको छ ?
हो, मैले बाबुको दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । छोरीलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर दुवैजना बाहिर हिँडिरहन्छौं । बस्ति निर्माणमा जाँदा छोरीलाई कुञ्जनाको दिदी भिनाजुको जिम्मामा छाड्थ्यौं । धेरैजसो उहाँहरुसँगै बसेकाले छोरीले कुञ्जनाकी दिदीलाई मामु र भिनाजुलाई बाबा भन्न थालिन् । अहिले पनि उहाँहरुलाई नै बाबामामु जस्तो मान्छिन् । मलाई त छोरीले अहिलेसम्म आफ्नो बाबुका रुपमा फिल नै गरेकी छैन । आजकाल ‘धुर्मुस बाबा’ भन्न थालेकी छ । कुञ्जनालाई चैं अलि पछ्याउन थालेकी छे ।
एकचोटि ज्वरो आएका बेलामा आँखाभरि आँशु पारेर सोधिन्, ‘तपाइर्ंहरु किन सँधै मलाई छोडेर जानुहुन्छ ?’ उनको त्यो प्रश्नले हामीलाई ज्यादै पिरोल्यो । आखिर एक्ली सन्तान हो ।
छोरीको स्कुलमा कत्तिको जानुहुन्छ ?
जम्मा एकपटक प्यारेन्ट्स डेमा गएको हो । त्यतिबेला स्कुलका सरहरुले पनि मलाई आफ्नो बच्चालाई ध्यान नदिएको भनेर निकै कुरा भन्नुभयो ।
अब पछाडि फर्कौं । तपाईंको आफ्नै बाल्यकालचाहिँ कसरी बितेको थियो ?
म सोलुखुम्बुको दुर्गम पहाडी गाउँमा जन्मेको हुँ । दुई भाइ र दुई बहिनीमाथिको जेठो छोरा भएकाले सानैदेखि पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने । ०४८ सालमा बसाइँ सरेर झापा गयाैं । स्कुल जाने-आउने र घरायशी काम गरेरै बाल्यकाल बितेको हो । गाईवस्तुलाई घाँस काट्ने, हलो जोत्ने, धान रोप्ने सबै काम गरियो ।
बिहानै पाँच बजे गोरु नारेर खेत जोत्न जान्थेँ । खाना खाएर स्कुल लाग्थेँ । स्कुलबाट फर्केर फेरि घरको काममा भिड्नुपथ्र्यो । पढाइमा चाहिँ अब्बल नै थिएँ । पहिलो हुन नसके पनि दोस्रो हुन्थेँ ।
कलाकार बन्ने लक्षण चाहिँ सानैदेखि थियो ?
शुक्रबार स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो । एकपटक मैले गीत गाउनुपर्ने भयो । तर, स्टेजमा उक्लेपछि म थरथर काँप्न थालेँ । गीत गाउन खोज्दा र्‍याल-सिंगान निस्किएर बेहाल भयो । लाजले भुतुक्कै भएँ । ५ कक्षा पास गरेर अर्को स्कुलमा भर्ना भएपछि चाहिँ मैले नाटक-साटक खेल्न थालेँ । कलाकारिताको लक्षण त्यहीँबाट प्रकट भएको हो ।
‘क्यारिकेचर’ चाहिँ कहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो ?
स्कुल पढ्दा नै हो । गाउँमा स्वस्थानीको साङ्गे हुँदा भाडामा ल्याएर टीभी हेर्ने प्रचलन थियो । त्यतिबेला ‘देवी’ टेलिसिरियल हिट थियो । त्यसमा शिवहरी पौडेलले ‘पूर्णे’ को क्यारेक्टर गर्नुभएको थियो । मैले सुरुमा क्यारिकेचर गरेको पूर्णेकै हो ।
त्यसपछि ‘कान्तिपुर’ सिरियलमा हरिवंश दाइले खेलेको वडाध्यक्षको क्यारिकेचर गरेँ । स्कुलमा साथीहरुसँग शिक्षकको क्यारिकेचर गरेर बस्थेँँ ।
तर, पछि गएर कलाकार बन्छु भन्नेखालको सोचचाहिँ त्यतिबेला थिएन । केवल रमाइलोका लागि गरिएको थियो । बरु चित्रकारितामा रुची बेसी थियो । कुनै पनि मान्छेको दुरुस्त अनुहार बनाउँथे । अहिले पनि सक्छु ।
बाल्यकालमा फिल्म कत्तिको हेर्नुहुन्थ्यो ?
खुबै हेरिन्थ्यो । नेपाली फिल्म सकेसम्म छुट्दैनथ्यो । घरबाट फिल्म हेर्न पैसा दिने स्थिति थिएन । तर, धान शिला खोज्नेदेखि अनेक तरिकाले पैसा जुटाएर हेर्थेँ । फिल्म हेरेको दिन स्कुलमा साथीहरुलाई डाइलग सुनाउने र कथा भन्ने मात्र काम हुन्थ्यो ।
तपाईंले पहिलोचोटि प्रत्यक्ष देखेको कलाकार को हो ?
एकपटक हरिवंश र मदनकृष्ण दाइहरु सिस्नुपानी नेपालले झापाको गौरादहमा राखेको कार्यक्रममा भाग लिन आउनुभएको थियो । म उहाँहरुको ठूलो फ्यान । धेरैतिर जी हजुर गरेर त्यो कार्यक्रमका लागि स्वयम्सेवक बन्ने मौका पाएँ ।
त्यतिबेला मेरो काखीमुनि पिलो आएको थियो । कार्यक्रममा भीड व्यवस्थापन गर्न हात उठाइनुपर्ने । त्यही क्रममा पाखुराले थिचिएर काखीको पिलो फुट्यो । खपिनसक्नु दुखाइले गर्दा कार्यक्रम छोडेर घर जानुपर्‍यो । महजोडीलाई नजिकबाट हेर्न पाइनँ ।
मैले नजिकबाट हेरेको चाहिँ ‘घामछाया’ कि हिरोइन क्षितिजा शाक्यलाई हो । त्यो घटना पनि रमाइलो छ ।
उहाँ एकजना आफन्तलाई भेट्न हाम्रो गाउँमा आउनुभएको रहेछ । हिरोइन गाउँमा आएको भनेपछि त हामी भुराहरुबीच कुदाकुद भइहाल्यो । म पनि स्कुलबाट गुटुङटुङ कुद्दै पुगेँ । म पुग्दा उहाँ बसेको घर अगाडि त ठूलै भीड जम्मा भइसकेको रहेछ । केहीबेरमा क्षितिजा शाक्य बार्दलीमा निस्किनुभयो र हात हल्लाउनुभयो । म त्यहाँ रहेको एउटा रिक्सामा उक्लिएर उहाँलाई हेर्दै हात हल्लाउँदा रिक्सा नै लड्यो र म पनि बुर्लुङ्ग पछारिएँ । रिक्सावालले मलाई एक थप्पड हान्यो । म रुँदै घर फर्किएँ ।
अर्को पनि अनुभव छ, राजेश हमाललाई हेर्न जाँदाको ।
उहाँ गौरादह आउनुभएको छ भन्ने सुन्नेवित्तिकै म बुर्कुसी मारेर कुदिहालेँ । बेपत्ताले चार किलोमिटर कुद्दै असिन-पसीन भएर गौरादह पुगेँ । म टक्क पुग्नु पनि, राजेश हमालको गाडी आँखै अगाडिबाट हुँइकिएर गयो । मैले उहाँलाई एक झलक पनि हेर्न पाइनँ । मलाई मरेझैं लाग्यो ।
उहाँलाई हेर्न पाउनेहरुको फूर्ति निकै ठूलो भयो । म सबैसँग सोध्न थालेँ- लुगा के लगाएका थिए, कपाल कत्रो थियो ? कालो थियो कि गोरो ? ठिक्क कालो कि धेरै कालो ? के भनेर गए ? तर, कसैले राम्रोसँग जवाफ नदिँदा निकै निराश भएँ । राजेश हमाललाई हेर्न नपाएकोमा लामो समय थकथकी लागिरह्यो ।
झापाबाट काठमाडाैं कहिले आउनुभयो ?
राजदरबार हत्याकाण्ड भएकै भोलिपल्ट म काठमाडौंमा उत्रेको हुँ । एसएलसी दिएपछि बुवाले त्यहीँको क्यापसमा भर्ना गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, मलाई चाहिँ काठमाडौंकै क्याम्पसमा पढ्ने रहर ।
घरको आर्थिक स्थिति ठीक थिएन । आमाको बिमारीले गर्दा बुवा ऋणमा डुब्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो भएको जग्गाजमिन बेच्दै ५ सन्तानलाई पढाइरहनुभएको थियो । मलाई काठमाडौंमा राखेर पढाउन सक्ने उहाँको अवस्था थिएन । मैले काठमाडौंमा काम खोज्छु र आफैंले खर्च जुटाएर पढ्छु भनेर उहाँलाई कन्भिन्स गराएँ ।
बुवाले ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर मलाई १७ सय रुपैयाँ हातमा राखिदिनुभयो । धरानबाट कोशी सुपर भन्ने गाडी चढेर ऋषिराम भन्ने दाइसँग काठमाडौं आएँ ।
कलंकी ओर्लिएपछि थाहा भयो, राजपरिवारको हत्या भएको । सडकमा गाडी चलेको थिएन । त्यहाँबाट हिँड्दै कोटेश्वर आइयो । कोटेश्वरमा ऋषिराम दाइका आफन्त हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ केही दिन बसेपछि अनामनगरमा कोठा लिएर बस्न थाल्यौं । दिउँसै बत्ति बाल्नुपर्ने कोठा थियो । मासिक १३ सय भाडा ।
बुवाले दिएको १७ सयबाट ८ सय रुपैयाँ घरबेटीलाई एडभान्स दिएँ । बाँकी पैसाले केही भाँडाकुँडा किनियो । कोठामा खाट थिएन । घरबाट ल्याएको गुन्द्री ओछ्याएर सुतिन्थ्यो ।
काठमाडौंमा गुजारा गर्न कत्तिको गाह्रो भयो ?
काठमाडौंमा मैले गरेको संघर्षको लामो कथा छ । धेरै रातहरु छन् भोकभोकै सुतेका । धेरै रात पाइनापल बिस्कुट खाएर सुतियो । ती बिस्कुटका खोल अहिले पनि मसित सुरक्षित छन् । कयौंचोटि बन्दाकोबीमा तेल नहाली छर्लङ्ग पानी हालेर पकाउँथेँ ।
सुरुमा मैले चित्रकारितामा केही काम पाइन्छ कि भनेर प्रयास गरेँ । केही आर्ट सेन्टरहरुमा धाउँदा मैले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखियो । तर, सिक्नलाई पैसा थिएन ।
त्यसमा पार नलाग्ने देखेपछि कलाकार बन्नेतिर लागेँ । त्यतिबेलाको सर्वाधिक चर्चित ‘हिजोआजका कुरा’ मा चान्स पाइन्छ कि भनेर सन्तोष पन्तको घर धाएँ । तर, म धापासीमा रहेको उहाँको घर कलाकार बन्न आउनेहरुको ठूलो भिड लागेको हुन्थ्यो । मैले चान्स पाउनेजस्तो देखिनँ र छोडिदिएँ ।
पढाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो ?
म काठमाडौं आएपछि एसएलसीको रिजल्ट निस्कियो । फर्स्ट डिभिजनमा पास भएँ । त्यसपछि आरआर क्याम्पसमा पत्रकारिता र अंग्रेजी विषय लिएर पढ्ने निर्णय गरेँ । तर, भर्ना गर्ने पैसा थिएन ।
बुवाले पठाएको १७ सय त्यतिबेलै सकिएको थियो । अनि धुईधुई काम खोज्नतिर लागेँ । पत्रिकामा एउटा सूचना देखेँ । मार्केटिङ गर्ने मान्छे मागेको थियो । कलंकीमा कार्यालय रहेछ । म खोज्दै पुगेँ । सेल्सब्वाईको काम भनियो । तलब नआउने, बेचेको कमिसन मात्र पाइने । मैले त्यही काम सुरु गरेँ ।
कराई, मैनवत्ति स्ट्यान्ड, ग्यासको पाइपलगायतका सामानहरु डोकोमा बोकेर बेच्नुपर्थ्यो । आयो… आयो… भनेर कराउँदै गल्ली-गल्ली चहार्थेँ । घरभित्र र पसलहरुमा पस्थेँ । कतिपय मानिसहरुले हेप्थे र गेटबाहिरैबाट लखेट्थे । कतिले चाहिँ राम्रो व्यवहार पनि गर्थे । सामान बिक्न भने असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ फिटिक्कै एउटा पनि बिक्दैथ्यो । अलिअलि पाउने पैसा पनि खाजा खाँदै सकिन्थ्यो ।
एकचोटि साँझपख डोकोमा सामान बेच्न हिँडिरहँदा एउटा जँड्याहाले ‘नक्कली सामान बेच्छस ?’ भनेर बङ्गै हान्यो । म कुलेलम ठोकेँ । रातभरी जरो आयो । त्यसपछि विरक्त लागेर त्यो काम छोड्ने निर्णय गरेँ । कम्पनीमा गएर हिसाब गर्दा १३ सय रुपैयाँ हात पर्‍यो । त्यही पैसाबाट ७ सयले क्याम्पस भर्ना भएँ ।
क्याम्पस नियमित जानुहुन्थ्यो ?
कहाँ जानु ? पहिलो वर्ष १७ दिन गएँ । दोस्रो वर्ष त्यस्तै ३९/४० दिन गएँ होला । तर, पास भएँ ।
मार्केटिङको काम छोडेपछि के गर्नुभयो ?
गौशालामा एकजना आफन्तकहाँ घरको काम गर्ने गरी बस्न थालेँ । तलव नआए पनि दुई छाक खान पाइन्थ्यो ।
कामचाहिँ क-के गर्नुपर्थ्यो ?
घरभित्रको सबै काम गर्थेँ । भात पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, बच्चाहरु स्याहार्ने, यिनै त हुन् ।
संघर्षका बेलाको अहिले अत्यधिक सम्झिने कुनै क्षण छ ?
एकदिन बेलुकीपख चाबहिलमा भौतारिँदै हिँडिरहेको थिएँ । बिहानदेखि केही नखाएको हुनाले भोकले पेटका आन्द्रा बटारिएका थिए । हिँड्दा हिँड्दै सडकमा फोहोर थुपारेको ठाउँनिर कसैले एक झोला भात फ्याँकेको देखेँ । मलाई त्यो भात टिपेर खाउँ-खाउँ जस्तो भयो ।
यताउति हेरेँ । एकजना टाइसुट लगाएको मान्छेले मलाई नियालिरहेका रहेछन् । उनले मेरो मनोदशा बुझेछन् क्यारे । ‘के भयो भाइ ?’ भनेर सोधे । मैले पिलपिल रुँदै भनेँ, ‘भोक लाग्यो ।’
उनले मलाई बौद्धमा एउटा भोजनालयमा लगे र पेटभरि भात खुवाए । अनि, पाँच सय रुपैयाँ पनि दिए ।
त्यसदिन साह्रै विरक्त लाग्यो । घरमा कम्तिमा हलो जोतेर सम्मानपूर्वक खान त पाइन्थ्यो भन्ने सोचेँ । त्यसपछि सदाका लागि काठमाडौं छोड्ने निर्णय लिएर झापा फर्किएँ ।
झापाबाट फेरि कसरी काठमाडौं आउनुभयो ?
घरमा गएर पनि मेरो मन शान्त हुन सकेन । टीभीमा हिजोआजका कुरा हेर्दा मैले त्यतिबेला सन्तोष पन्तको घर धाउँदा भेटेका व्यक्तिहरुले खेलिरहेको देख्न थालेँ । हत्तेरी ! मैले पनि प्रयास जारी राखेको भए चान्स पाउने रहेछु भन्ने लाग्यो । त्यसपछि फेरि काठमाडौं फर्केर कलाकारितामै केही गर्छु भन्ने अठोट लिएँ । अनि ठूलोबुवासित गाडीभाडा मागेर काठमाडौं आएँ ।
थापाथलीमा एक साथीसँग रुम सेयर गरेर बस्न थालेँ । सबै घरायशी काम मैले गर्थेँ, कोठाभाडा साथीले तिर्थे ।
त्यही क्रममा मोहन निरौलाको परिवर्तन नेपाल भन्ने संस्थाले नि:शुल्क अभिनयको तालिम दिन लागेको थाहा पाएँ । त्यो तालिम लिएपछि उहाँहरुले सडक नाटकमा खेलाउन थाल्नुभयो । दुई सय रुपैयाँ पनि आउँथ्योे । त्यही क्रममा केदार घिमिरेजी (माग्ने बुढा)सँग भेट भयो । अनि हामी जोडी बनेर अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यौं ।
उहाँसित भेटचाहिँ कसरी भयो ?
मैले एउटा सडक नाटक खेल्दा उहाँले दर्शकका रुपमा हेर्नुभएको रहेछ । तर, उहाँसित भेटचाहिँ जितु नेपाल दाइको कार्यालयमा भएको हो । हाम्रो क्याम्पसमा एकपटक नयाँ विद्यार्थीका लागि स्वागत कार्यक्रम हुँदा जितु नेपाल प्रस्तुतिका लागि आउनुभएको थियो । मैले पनि कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएको थिएँ । जितु दाइलाई निकै मन परेछ । कार्यक्रम सकिएपछि उहाँले मलाई ‘गीताञ्जली’ कार्यक्रमका लागि स्कृप्ट लेख्ने अफर गर्नुभयो । एउटा स्कृप्टको खाका लिएर कमलादीमा रहेको नेपाल आट्र्स कला मन्दिरमा आउन भन्नुभयो ।
म एक दिन स्कृप्ट लिएर जाँदा केदारजी पनि स्कृप्ट बोकेर पुग्नुभएको रहेछ । दुवैको स्कृप्ट पढेपछि जितु दाइले तिमीहरु संयुक्त रुपमा गर न त भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । हामी राजी भयौं । यसरी जितु दाइले नै हाम्रो जोडी बनाइदिनुभएको हो ।
पछि तपाईंहरुको सम्वन्धचाहिँ किन बिग्रियो ?
सम्वन्ध कहिल्यै बिगि्रएको छैन । हल्लामात्र हो । मिडिया हबमा आर्थिक संकट आएपछि केदारजीले ‘मेरीबास्सै’ छोड्ने निर्णय लिनुभयो । मैलेचाहिँ केही समय निरन्तरता दिएँ । त्यसरी हाम्रो जोडी छुट्टियो । यसकै आधारमा केही मिडियाले सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर लेखे । खासमा सम्वन्ध हाम्रो अहिलेसम्म पनि उत्तिकै सुमधुर छ । सहकार्य नभए पनि भावनात्मकरुपमा हामी एकदम आत्मीय छौं ।
तर, मेरीबास्सैमा काम गर्दा लामो समयसम्म तपाईंहरुबीच बोलचालै नभएको होइन र ? सुटिङ पनि बेग्लाबेग्लै गर्नुहुन्थ्यो त ?
सुटिङ बेग्लाबेग्लै गरेको चाहिँ सजिलोका लागि हो । हाम्रो बेग्लाबेग्लै कथा हुन्थ्यो । एकै दिन सुटिङ सक्न गाह्रो हुने भएपछि बेग्लाबेग्लै गर्न थाल्यौं ।
भाइ (जिग्री) लाई पनि कलाकारितामै ल्याउनुभएको छ । उहाँले अहिले भद्रगोलबाट आफ्नै पहिचान बनाइसक्नुभयो । दाजुभाइबीच प्रतिस्पर्धाको भावना कत्तिको हुन्छ ?
केको प्रतिस्पर्धाको भावना हुनु ? उसका लागि म दाजुमात्र नभएर अभिभावक पनि हुँ । उसले राम्रो गर्दा सबैभन्दा बढी खुशी म नै हुन्छु । अहिले रंगशाला निर्माणको अभियानमा पनि उसले मलाई बलियो साथ दिइरहेको छ । खासमा सबैभन्दा अगाडि रंगशाला बनाउन मलाई घच्घच्याउने मेरै भाइ कुमार हो ।
तर, तपाईंहरुबीच असमझदारी भएर बेग्लाबेग्लै बस्न थाल्नुभएको होइन ?
अहँ होइन । त्यतिबेला उसले एउटा अफिस खोलेको थियो । तर, बिहान अबेरसम्म सुत्थ्यो । सबै कुरामा मेरै भर पर्थ्यो । त्यसैले उसले आफ्नै बलबुँतामा अगाडि बढ्न सकोस् भनेर छुट्टै बसाएको हुँ । मैले सोचेजस्तै त्यसपछि उसले राम्रो प्रगति पनि गर्‍यो ।
अब भाइलाई बुहारी खोजिदिने बेला भएन ?
बेला भयो । मिल्यो भने यसैपालि बुहारी भित्र्याउने योजनामा छौं । उपयुक्त कन्याको खोजी भइरहेको छ ।
पछि गएर तपाईंको राजनीति गर्ने सुर छ कि छैन ?
बिल्कुल छैन । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि सेवकै भएर काम गर्ने संकल्प छ । भोलिका दिनमा आम मानिसको भावना त्यस्तो रह्यो भने छुट्टै कुरा हो ।
कुनै राजनीतिक पार्टीले अफर गरेका छन् ?
धेरै अफर आएको हो । वैकल्पिक पार्टीबाट पनि आए । काठमाडौंको मेयर लड्न पनि धेरै साथीहरुले आग्रह गरेका हुन् । तर, मेरो सोच त्यो थिएन ।
आफूले निर्माण गरेका बस्तीहरुमा कत्तिको पुग्नुहुन्छ ?
नियमित गइरहन्छु । बच्चाबच्ची झ्याम्मिन्छन् । बालबालिकाको भविश्य नै हाम्रो बस्ती निर्माणको मुख्य उद्देश्य थियो । हामी जाँदा उनीहरु ‘बाबा, मामु’ भन्दै रमाउँछन् । चक्लेट माग्छन् । म सेकेन्ड भएँ, फर्स्ट भएँ भन्छन् । ती बच्चाबच्चीको अनुहार हेर्दा सबै पीडा र आलोचना बिर्सिइन्छ । अनलाईनखबरबाट साभार